Nwoke onye Edmonton adagbuona onwe ya na Cancun - Igbo News | News in Igbo Language
Jan 9, 2013 - 23:47 Updated: Jan 19, 2021 - 23:47
Chris Rogers gbara afọ 21. A mụrụ ya na St. Albert, na Alberta. Ọ na-aga akwụkwọ na mahadum University of Alberta.
Ọ dagburu onwe ya na Great Parnassus Resort na Cancun, ebe ya na ndị enyi ya jere ịnwe ezumike.
Ozi anyị nwetere na-ekwu na Rogers jere n’ogige ebe a na-agba egwu ndị ntorobia n’ụlọ oriri na nkwari ahụ. Ọgụ dara ebe ahụ. A kụrụ Rogers ọkpọ n’imi. Orima-anya malitere buwe ya. Ọ ga-ghachiri n’ọnụ ụlọ nke ya n’ụlọ-elu họtelụ ahụ.
A sị n’orima-anya bugideziri ya, o si n’ụlọ-elu dapụ were nwụọ.
Chidi Igwe Mar 6, 2013 0
Chidi Igwe Jan 21, 2013 0